Xiriiriyaha khadka tooska ah
Isku xiraha bool xiira
Isku -xireha kala -goynta otomaatiga ah
Isku haynta jeexdin isbarbar socda
Xidhiidhiyihii daloolka dahaaran
Hakinta xiisadda cla Hakinta hakinta
Nin preformed qabsado la haysa dhamaadka dhintay
Insulator ganaax ka kooban
Qalabyada kale ee korontada
Clamps Khadka kulul
Aluminium kulul line clamps tap
Hawada xiisadda Aluminium
Habka xiisadda waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro laguna adkeeyo khadadka LV-ABC oo leh farriin dhexdhexaad ah oo dahaaran.
Xirfadlayaashan way fududahay in la rakibo iyada oo aan lahayn qalab iyo ku habboon xaaladaha cimilada ee kala duwan.
Xiridda kabka naxaasta
Ekaabayaasha lectric C qaabka suunka tuubooyinka naxaasta ah waxaa loo adeegsadaa ilaalinta hillaaca dhismaha, hogaamiyaha xirashada iyo isku xirka shaqada saafiga ah, oo ka samaysan wax naxaas ah iska caabinta hooseysa waa tabinta korantada wanaagsan, iska caabinta daxalka wanaagsan iyo rakibidda habboon, wax soo saarka khaaska ah, qiimaha waa tartan.
BOOQASHADA GUY GUUD EE ARAGTIDA
Strand Vise waxaa sidoo kale loogu yeeraa goynta siligga nin otomaatig ah, waa qalab koormeed u eg oo inta badan ku yaal hoosta tiirarka gudbinta. Halkan waxay ku xirtaa hoos nin silig. Strand vise ayaa sidoo kale loo adeegsadaa khadadka dusha sare halkaas oo ay ku xidhan tahay codsiyada dhammaadka ah. Shaqadeeda asaasiga ahi waa in la joojiyo siligga ninka iyo xadhigga kore.
Vise strand waxaa loogu talagalay inay ku dhegto fiilada iyadoo la adeegsanayo mabda 'far-dabin. Halkaan, il ayaa mashruucyada daankiisa ka geliya fiilada sidaa darteed dejinta aaladda. Daamanka ayaa la sii daayaa si looga hortago inay kor u siibtaan.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan vrand stise waa inaysan lahayn nuts si ay ugu xoog sheegato fiilooyinka. Tani waxay ka dhigan tahay inaan loo baahnayn in lagu cadaadiyo gacanta.
Dhismaha adag ee firaaqada xarigga ayaa ka dhigaysa mid lagu kalsoonaan karo codsiyo kala duwan iyo waliba deegaanno kala duwan. Waxay ka kooban tahay birta galvanized oo aan xoog badnayn laakiin sidoo kale laga ilaaliyay burburka kiimikada.
Vrand Stise waxaa loo adeegsan karaa xargo kala duwan oo ay ku jiraan alxanka alum, galvanized, aluminized, iyo EHS, strand steel.
Naqshadeynta xarriiqda xarigga ayaa ka dhigaysa mid la jaanqaadi karta qaybo badan oo warshadaha ah. Waxay taageeri kartaa fiilooyin kala duwan oo ballaaran iyada oo ay ugu mahadcelineyso naqshadeynta bale -ga caalamiga ah.
GUY-LINK waxaa ugu horrayn loo adeegsadaa taleefannada iyo korontada si loo joojiyo xadhigga ama usha meesha ugu sarraysa iyo isha barroosinka. Loogu talagalay Joojinta, Guy Strand iyo Wire Static. Waxaa loo adeegsaday in lagu joojiyo farriintii teendhada taageerada cirka, iyo dhammaadka sare iyo hoose ee ragga hoose.
Codsiyada ku kala firdhinta dusha sare ama fiilooyin nin taageersan
• Gargaarka otomaatiga ah waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo
Awoodda Sare (HS), Common (Com), Siemens-Martin (SM), Adeegyada
(Util) iyo xarigga Nidaamka Dawanka
dhammaan noocyada siligga ninka ee kor ku taxan, oo lagu daray Awood Dheeraad ah (EHS) iyo
• Dhammaan kaabayaasha tooska ah ee GLS waxay qaban doonaan ugu yaraan 90% ninka
silig lagu qiimeeyay xoog jabis
Waxyaabaha: Shell - Alloy Aluminium Awood Sare
Daamanka - Birta Dahaarka ah
Xiridda xariijinta kulul (haysa khadka tooska ah waa aaladaha tooska ah ee loo isticmaalo isku-xirnaanta qaybinta tubbada.
1-Daawaha naxaasta ah iyo shubka aluminiumka aluminiumku wuxuu bixiyaa xoog sare, iska-caabbinta iska-caabbinta iyo is-waafajinta kaariyeyaasha
2-Ballaarinta daanka ee la dheereeyey micnaheedu waa xiriiriyaha kaarka oo aad u wanaagsan, heerkulka wadajirka oo yaraaday, socodkii qabowga kaariirka ugu yaraa iyo qalloocintii kaariyihii intii la rakibayay
3-Muuqaalka gu'ga raran wuxuu magdhow u yahay socodka qabow iyo dib-u-dhigidda adkaynta gariirka
4-Muuqaalka gu'ga raran wuxuu magdhow u yahay qulqulka qabowga iyo dib-u-dhigidda adkaynta gariirrada
4-indha-indheynta been-abuurka ah waxay bixiyaan awood aan daxar lahayn iyo ballaarinta labisan marka la raro
5-Xidhiidhka tuubada ee dhinac taagan ayaa ka hortagaysa daxalka suurtogalka ah ee kaadiyaha
Copper Aluminum Hot Line Haya
Kumbiyuutarrada Kumbuyuutarrada ayaa ah aaladaha tooska ah ee khadka tooska ah ee ku habboon isku -xidhka tuubada.
Ballaarinta daanka ee la dheereeyey micnaheedu waa xiriiriyaha kaarka oo aad u fiican, heerkulka wadajirka oo yaraaday, socodkii qabowga kaariirka ugu yaraa iyo maroojintii hagitaankii oo yaraaday intii la rakibayay. .Xiriirka tuubada dhinaceeda ah wuxuu ka hortagayaa daxalka suurtogalka ah ee kaariye ama isku xirka isku xirayaasha labada dhinac. Tijaabinta Wareegga Hadda Socda ee ANSI C119.4 waxay bixisaa damaanad -qaad ah in isku -xirnaanta khadadka kulul ee MPS ay u adkeysan doonto ballaarinta xiriirka si habboon loo rakibay.
Qaboojiyaha YH oo ka kooban Zinc Oxide
Dabayaaqadii 20th Qarnigii, Xadhigga xabagta xabagta ah ee dahaarka leh waa nooc ka mid ah badeecadda ay jiilka cusub u dhiirrigelinayaan suuqa Mareykanka, Japan iyo dalalka kale. Waa kan ugu horumarsan marka la barbar dhigo midka caadiga ah. Hordhaca farsamadan teknolojiyadda sannadihii 1980 -meeyadii, dalalkeennu waa horumariyeen oo la kulmeen dalabaadka IEC. Waxyaabaha isku dhafka ah ee polymer -ka ayaa ka yar, ka fudud, u adkaysta wasakheynta, caddaynta qaraxa iyo caddaynta naxdinta marka la barbar dhigo muraayadaha iyo galaas.
Xarig birta ka samaysan
Qalabka: Birta aan lahayn 201/304/316, dhererka oo dhan ayaa lagu heli karaa codsigaaga
Gariiradda cajalad ahama
Copper, Aluminum Split connector bolt
Kala qaybi isku xiraha bool
Daaweynta dusha: daasadda dahaarka leh / naxaasta dahaarka ah
Cabbirka waa la heli karaa (aag goos goos ah): 16mm2 - 240mm2
Copper, Aluminum Split bolt connecto wuxuu ku habboon yahay isku xigxiga iyo gaadiidka kaariye ee shabaqa korontada, oo ka samaysan naxaas. Waxay ahayd mid aad u adkaysanaysa dildilaaca iyo daxalka.
Copper isku xira haysa T nooca haysa
Waxyaabaha: 99.9% naxaas saafi ah
Dusha: Daasadda Dahaarka ah
Waxaa lagu hagaajiyaa boolal waxaana loo adeegsadaa isku xirnaanta u dhexeeya qalabka korontada ee leh kabka iyo qalabka qaybinta gudaha
Terminal -ka Wareegga Wareegga Copper
Taxanaha Axdiga Hore waxay ku habboon yihiin isku xirka kaariyeyaasha naxaasta (OT-3A ilaa OT-1000A) ee fiilada korontada oo leh qalab elektiroonig ah. Waxay ka samaysan yihiin tuubo naxaas ah T2 waxaana lagu dahaadhay daasad ama aashito nadiif ah. Heerkulka shaqadooda waa -55 ℃ ilaa 150 ℃.
Shirkaddu waxay dhaaftay shahaadadii tayada, bay'ada iyo caafimaadka maamulka iyo maaraynta badbaadada, waxayna ku kasbatay sumcad wanaagsan isla warshadaha leh alaab tayo sare leh, qiimo macquul ah iyo sumcad wanaagsan.
Cinwaanka: No.268, Wei 11 Road, Aagga Horumarinta Dhaqaalaha Yueqing, Magaalada Yueqing, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Right Copyright -2020 - 2021 Taageero farsamo: